Jesoa ara-tantara - Wikipedia
I Jesoa dia Jiosy tany Palestina, avy any Galilea, izay teraka teo anelanelan' ny taona 7 sy 5 tal. J.K. Rehefa hiresaka ny amin' i Jesoa avy any Nazareta anefa ny mpahay tantara dia milaza fa tsy afaka hanambara izay zavatra tena nataony na tena noteneniny noho ny saika tsy fisian' ny tahirin-kevitra tsy ara-pivavahana miresaka ny aminy. Ny loharanon-kevitra sisa dia ireo lahatsoratra tokony nosoratana teo anelanelan' ny taona 65 sy 110 taor. J.K., izay nahazo ny anarana hoe εὐαγγέλιον / euangélion ("Evanjely" na "Filazantsara" na "Vaovao Mahafaly") tamin' ny taona 150 any ho any, izay lahatsoratra tsy nosoratana handaharana tantara fa ho fiarovana ny finoana, izay tsy tena azo antoka amin' ny fitradrahana azy hahazoana ny tantaran' ny zotram-piainan' ny olona resahina ao aminy.
Araka ireo Vaovao Mahafaly dia isan' ireo nanaraka ny fampianaran' i Joany mpanao batisa i Jesoa alohan' ny hiantseharany amin' ny fitorian-teny mitety vohitra nandritra ny roa na telo taona, niaraka tamin' ny mpianatra vitsivitsy, indrindra tao Galilea, ka tamin' izany no nanatanterahany fanasitranana sy fandroahana fanahy ratsy. Nahasarika olona maro izy nefa koa nahatonga ny fahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana hankahala azy. Nosamborina sy nohomboana tamin' ny hazo fijalliana izy tokony tamin' ny taona 30 tao Jerosalema teo ambany fanapahan' i Pontio Pilato, nandritra ny fankalazana ny Paska jiosy.
Ny fanambaràn' ireo mpianany ny fitsanganany ho velona, izay anaiky azy ho Mesia na Kristy, sy nampita ny tantarany sy ny fampianarany, no niteraka ny fivavahana krostiana. Ho an' ny Kristiana sia Zanak' Andriamaitra sy Mesia izay nambara mialoha ao amin' ny Testamenta Taloha sady nalefa hamonjy ny olombelona i Jesoa. Ao amin' ny silamo dia antsoina hoe é ʿĪsā i Jesoa sady haberin' ny Miozolmana ho mpaminany lehibe.
Ny lazan' ny hafatra nomeny izay nampitain' ny fiangonana kristiana isan-karazany, sy ny fivoasana omen' ny fiangonana tsirairay an' izany hafatra izany dia niteraka kolontsaina maro sy nanako tao amin' ny kolontsaina sy sivilizasiona sasany nandritra ny Tantara.
1.2 I Nazareta
2 Ny fiteny nampiasain' i Jesoa
4 Loarano sy fanamarihana
Ny hoe Jesosy na JesoaModifier
Ny anarana hoe Jesoa dia hita ao amin' ny Baiboly katolika amin' ny teny malagasy fa ny Jesosy kosa ao amin' ny Baiboly protestanta amin' ny teny malagasy. Ny hoe Jesosy dia fanagasiana ny teny anglisy hoe Jesus, izay avy amin' ny teny latina hoe Iesus, izay avy amin' ny teny grika hoe Ἰησοῦς / Iêsoûs, izay avy amin'ny teny hebreo hoe Yeshua na Yehoshua.
Ny anarana hebreo lava hoe Yehoshua no ampiasaina amin' ny endrika fohy hoe Yeshua. Izany teny izany dia ahitana ny hoe Yeho na Yeh izay fanovan' ny hoe Yaho na Yah (sahala amin' izay hita ao amin' ny hoe Halelu Yah) izay fanafohezana ilay anaran' Andriamanitra hoe Yahweh na Jehovah. Ny hoe Yehoshua izany dia azo adika hoe "Mpamonjy i Yahweh" na "Yahweh dia famonjena". Mitovy fototra sy dika ny hoe Jesoa sy Josoa (na Jôsoe) izay samy avy amin' ny teny hoe Yehoshua na Yeshua.
I Nazareta dia tanàna ao avaratr' i Israely any Galilea. Araka ny lovantsofina kristiana dia ao no tanànan' i Josefa sy i Maria izay nitaizan' izy ireo an' i Jesoa tamin' ny fahazazany.
Niantsoana ireo mpianatr' i Jesoa ny hoe Nazôreana na Nazareana na Nazarena sady niantsoana an' i Jesoa tenany, noho izy nandany ny fahazazany tao Nazareta. Nantsoin' ny Jiosy (na Jody) tamin' io anarana io ihany koa ny Kristiana voalohany.
Ny fiteny nampiasain' i JesoaModifier
Tamin' ny vanimpotoana niainan' i Jesoa dia fiteny roa ifaneraseran' ny vahoaka samihafa tanàna sy firenena no nanjaka teo amin' ny tontolo grekô-rômana, izay niara-nampiasaina tamin' ny fitenin' ny olona eo an-toerana: ny fiteny grika no najaka tamin' ny faritra manodidina an' i Mediteranea hatrany Rôma, sy ny fiteny arameana (na aramiana) tany Siria sy tany amin' ny tany Atsinanana. Ireo fiteny roa ireo dia samy notenenina tao Palestina: ny fiteny arameana dia notenenina tany Galilea sy tany ambanivohitr' i Jodea. Ny fiteny grika kosa efa niditra tany Jodea avy tao amin' ny morontsoraka sy ireo tanàn-dehibe anjakan' ny kolontsaina grika (helenista) toa an' i Kaisarea (na Kaisaria na Sezarea), ary ireo Jiosy helenista tany am-pielezana dia nanana sinagôga tao Jerosalema. Ny fiteny grika no fiteny nampiasana teo amin' ny fandraharaham-panjakana sy ny olona ambony teo ara-toekarena sy ara-kolontsaina; misy anefa ny mpikaroka milaza fa tsy niteny grika ny Galileana, eny tsy nahazo ny fiteny grika akory aza.
Ny fiteny hebreo kosa dia fiteny masina teo amin' ny Jiosy, izay amakiana ny Soratra Masina sy ihirana ny Salamo. Mety mbola be mpampiasa io fiteny io tao amin' ireo fianakaviana manam-pifandraisana amin' ny asam-pisoronana sy ireo nahita fitaizana amin' izany. Ho an' ireo izay tsy mahazo intsony ny fiteny hebreo dia nisy ny targoma amin' ny fiteny arameana izay manampy amin' ny famakiana ny Soratra Masina. Raha ekena ny maha isan' ny fianakaviana mpisorona na levita an' i Jesoa dia mety nianatra teny hebreo izy tamin' ny alalan' ny rainy (Josefa) sy noho ny fankanesany any amin' ny sinagôga: misy andininy ao amin' ny soratra kanônika kristiana toa milaza fa namaky teny amin' ny fiteny hebreo izy sady mety nahay nanoratra amin' io fiteny io koa. Araka izany dia tokony ho niteny amin' ny endrika an-toeran' ny fiteny arameana, izay notenenin' ny tantsaha tany Galilea i Jesoa, sady nampiasa ny fiteny hebreo litorjika rehefa miady hevitra amin' ireo mpampiana-dalàna (na mpanoradalàna).
Misy ady hevitra ny amin' ny nampiasany na tsia ny fiteny grika: ny mpikaroka sasany dia mihevitra fa tsy misy zavatra manondro fa niteny grika i Jesoa satria ny sasany amin' ireo mpianany dia mety nandika teny; mihamaro anefa ny manam-pahaizana manokana izay mihevitra fa azo inoana fa nampiasa ny fiteny grika izy na dia tsindraindray fotsiny aza.
Ao amin' ny fivavahana sy firehana ara-pivavahana
Loarano sy fanamarihanaModifier
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jesoa_ara-tantara&oldid=1010866"
Dernière modification le 11 Aprily 2021, à 18:52
Voaova farany tamin'ny 11 Aprily 2021 amin'ny 18:52 ity pejy ity.